« Hebreo 2 [MDG - malagasy] »
2:1 Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay zavatra efa rentsika, fandrao hisy fotoana hamelantsika izany ho votsotra.
2:2 Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana sy ny tsy fankatoavana rehetra,
2:3 Hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin’ny voalohany ary namafisin’izay nandre Azy tamintsika kosa,
2:4 Sady Andriamanitra koa no niara-nanambara taminy tamin’ny famantarana sy ny asa lehibe ary tamin’ny fahagagana samihafa sy ny fanomezan’ny Fanahy Masina araka ny sitrapony.
2:5 Fa tsy anjely no nampanekeny ny fiainana ho avy, izay lazainay.
2:6 Fa ny anankiray nanambara teo amin’ny teny iray hoe: “Inona ny olona, no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak’olombelona, no amangianao azy?
2:7 "Nataonao ambany kely noho ny anjely izy, efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana izy, ary nampanjakainao amin’ny asan’ny tananao izy;"
2:8 Ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao ho eo ambanin’ny tongony.” Fa tamin’ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra, dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy. Nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra.
2:9 Fa hitantsika Jesosy, izay natao ambany kely noho ny anjely ka niaritra fahafatesana, ary dia voasatroka voninahitra aman-daza, mba hanandrana ny fahafatesana ho an’ny olona rehetra Izy noho ny fahasoavan’Andriamanitra.
2:10 Fa mendrika Ilay anton’ny nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra, raha mitondra zanaka maro ho any amin’ny voninahitra, mba hahatanteraka ny Tompon’ny famonjena ireo amin’ny fahoriana.
2:11 "Fa iray no niavian’izy roroa, na Izay manamasina, na izay hamasinina; koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe “rahalahy,”"
2:12 "Ka manao hoe: “Hitory ny anaranao amin’ny rahalahiko Aho; eo amin’ny fiangonana no hihirako fiderana ho Anao.”"
2:13 Ary koa: “Izaho hatoky Azy.” Ary indray koa: “Indreto Izaho sy ny zaza nomen’Andriamanitra Ahy.
2:14 "Koa satria manana nofo aman-drà ny zaza, dia mba nandray izany koa Izy, mba handringanany amin’ny fahafatesana ilay manana ny herin’ny fahafatesana, dia ny devoly;"
2:15 Ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin’ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana.
2:16 Fa hita marina fa tsy naka ho eo aminy ny toetry ny anjely izy, fa naka ho eo aminy ny toetry ny taranak’i Abrahama.
2:17 Koa amin’izany dia mendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin’ny zavatra rehetra Izy, mba ho mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin’Andriamanitra, mba hanaovany fampihavanana noho ny otan' ny olona.
2:18 Satria nijaly ny tenany, raha nalaim-panahy Izy, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy.